Opinions | Eleven Media Group
အမုန်းတရား ထွန်းကားသော နေရာ
“ယခုနံနက်ခင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေကို ယူဆောင်ခဲ့ပြီ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ငါရဲ့နှလုံးသားထဲ တိုးဝင်ကာ ကမ္ဘာလောကဆီသို့ ကူးစက်သွားတော့မယ်။ လူသားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။ ငါနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူတွေ စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ခွင့်ရကြပါစေ။ ဒီနေ့ကို စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့ ငါ့မှာ တာဝန်အထူးရှိနေတယ်” Read more about အမုန်းတရား ထွန်းကားသော နေရာ
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး စာချုပ် အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား
အစိုးရသစ်၏သက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်သို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်လာအံ့ဆဲဆဲ ကာလတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စိန်ခေါ်မှုတို့သည် ရှေ့မတိုးဘဲ နောက်သို့ပင် ဆုတ်နေသည်။ နာတာရှည် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးဟု ဆိုနိုင်သည့် ပြည်တွင်းစစ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေမရှာနိုင်သရွေ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့သည် ကြမ္မာငင်နေဦးမည်သာဖြစ်သည်။ Read more about ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး စာချုပ် အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား
ဦးနု ပြောသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
(၁)၁၉၃၄-၃၅ ပညာသင်နှစ်တုန်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကိုအောင်ဆန်းကို ကျွန်တော် ပထမဆုံး တွေ့ဖူးတာပါ။ သူက Intermediate ကျောင်းသား၊ ကျွန်တော်ကတော့ တက္ကသိုလ်ကို တတိယအကြိမ် ရောက်လာပြီး ဥပဒေတန်း တက်နေတုန်းကပေါ့။ ခု လန်ဒန်မှာ AF PEL ကိုယ်စားလှယ်လုပ်နေတဲ့ ကိုအုန်းက ကျောင်းသားသုံးယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကို တိုက်တွန်းတယ်။ အဲဒီသုံးယောက်က မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဧရာမပြယုဂ်ကြီးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူက တွေးတယ်။ အဲဒီသုံးယောက်မှာ ကိုအောင်ဆန်းက တစ်ယောက်အပါအ၀င်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို ကျော်ငြိမ်းနဲ့ တက်ဘုန်းကြီး ကိုသိန်းဖေ။ Read more about ဦးနု ပြောသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
သူ (သို့မဟုတ်) . . .
၁၉၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်၊ ၁၂၇၆ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက် စနေနေ့ နံနက်လင်းအားကြီး အချိန်မှာ မကွေးတိုင်းထဲက နတ်မောက်ဆိုတဲ့ တောမြို့လေးမှာ သူ့ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဇာတာကို နာမည်ကျော် ဆရာဦးထွန်းမြတ်က ‘ဘုံပညာနှင့် ပြည့်စုံသော သတိုးသားကို မာတာမိခင် ဖွားသန့်စင်သည်၊ နာမသညာ ခေါ်တွင်ရာကား မောင်ထိန်လင်း အသက်ရာကျော် ရှည်စေသော်’ ဆိုပြီး ဇာတာဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ‘ဘုန်းပညာ’ လို့ မရေးဘဲ ‘ဘုံပညာ’ လို့ ရေးသားထားတာကလည်း သူ့ဇာတာရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ဆိုရပါမယ်။ Read more about သူ (သို့မဟုတ်) . . .
၆၇ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မြန်မာ့အသံကနေ ညပိုင်း သူ့ကျွန်မခံပြီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ပြန်လည်ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ချိန် မင်းလှခံတပ်၊ ကွေ့ချောင်းခံတပ်တွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ အခါမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ချီတက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကို လှေသင်းအတွင်းဝန်မင်းကြီး ဦးစီးတဲ့ မြင်းခြံစစ်ကြောင်းက စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အား ကွာခြားလို့ မြန်မာတပ်တွေ အရေးမလှတော့ဘဲ မြင်းခြံစစ်ကြောင်း ဆုတ်ခွာချိန်မှာတော့ လှေသင်းအတွင်းဝန်မင်းကြီးက တပ်မှူးငယ်တွေကို မချိတင်ကဲ လေသံနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို မှတ်သားမိပါတယ်။ Read more about တက်ကျိုးလျှင် လက်ထိုးလှော်မည်